IAfrika yeVeki yeFashoni eNigeria Amahlakani kunye noDaViva kuMdlalo weCatwalk
IAfrika yeVeki yeFashoni eNigeria Amaqabane eDaViva aneeMidlalo ye-Urban Catwalk Show
Funda ngezinto ezenziwayo kunye nezingenziwayo kwi-Eyeshadow isicelo ngu-DIMMA UMEH
AIveki yefashoni eNigeria I-2018 ngokubambisana ne Iindwangu zeDaViva ibibambe umnyhadala wangaphambi komnyhadala - Urban Catwalk bonisa nge-Pasika ngoMvulo 2nd Nge-Epreli kwi-Palms Mall Lekki, Lagos. Umboniso wombhiyozo wonyaka owandulela iveki yemfashini ubonise abayili abanetalente, Kola Kuddus, U-Godwin Green, Ingingqi yeWawa, Uyilo lweMarble Edge, Uyilo lwenenekazi lam, Ukufika kweArazu kwaye Zii Studios ukwenza iziqwenga ezihle kakhulu kusetyenziswa amalaphu eDaViva.
Umsitho uqalwe kwivenkile yeDaViva phambi kokuba iimodeli zijikeleze ezivenkileni zinxibe uyilo olwahlukileyo lokwazisa malunga ne-AFWN2018 ngelixa ababekhona kunye nabathengisi abanomdla babuza imibuzo bethatha iifoto. IVeki yefashoni yase-Afrika eNigeria liqonga elixhasa abaqulunqi bezayo abavela eNigeria naseAfrika.
Ushicilelo lwesihlanu lucwangciselwe ukubamba i-6th - 8th NgoJulayi kwiqonga lezobuGcisa kuZwelonke kunye nabayili abangama-50 base-Afrika abavela kumazwe ahlukeneyo afana neNamibia, iZambia, iNigeria, iGhana, iZimbabwe, i-UK kunye nokubonisa ngakumbi kumsitho weentsuku ezintathu wefashoni yehlabathi.
Jonga imifanekiso kwi-Urban Catwalk Show…
Uyilo lweMarble Edge
I-Adamu Indimi eneemodeli
IVeki yeFashoni yaseAfrika eNigeria IVeki yeFashoni yase-Afrika ngo-2018 EMVA AFWN2018 Ukufika kweArazu Ingingqi yeWawa UDaviva U-Godwin Green Kola Kuddus Uyilo lweMarble Edge Uyilo lwenenekazi lam Zii Studios
Imfashini kunye neNdlela yokuPhila yeTiffany Amber Ushers Kumsitho wama-20 wokuBhiyozela isitayile ngohlobo oluKhulu
Dibana nabaYili beVeki yeFashoni yase-Afrika eNigeria ka-2018 iTheed 'ye-African Heritage Arise'
Abaqulunqi abangama-45 Baphaya kulo lonke ilizwe elibekwe ukuba babonise umboniso kwiVeki yeFashoni yeLagos I-2018 | IIPHOTOS
IVeki ye-Afrika yefashoni eNigeria i-2018 ibuyela kwiqonga lezobuGcisa kuZwelonke ngoJulayi njengoko bemakisha iminyaka emi-5 yokuBhiyozela iLifa leMveli lase-Afrika